ကြားသိရသမျှ Archives - La Yaung
April 6, 2020 La Yaung 0
ဒီရောဂါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး UK နဲ့ မြန်မာပြည် အကြောင်းလေးယှဉ်ပြောချင်တယ်။ ကို့ကိုဘယ်နိုင်ငံပိုချစ်သလဲဆို ကိုမွေးခဲ့ပြီး အခြေခံပညာတွေသင်ပေးလိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပိုချစ်တယ် ကို့ကိုနေခွင့်ပေးထားပြီး အဆင့်မြင့်ပညာတွေသင်ပေးလိုက်တဲ့ [……]
သိစေချင် ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ အပျက်ပျက် နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်ခဲ့တဲ့ မင်းရာဇာရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ ဒီကနေ့မှာ ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံးကို [……]
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့် ဗဟိုကော်မတီသတင်းထုတ်ပြန်ချက် Monday, April [……]
COVID-19 ရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (၆-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀) နာရီ ၁။ [……]
ကိုရိုနာရောဂါပိုးရှိသူ အသက်ရှူထုတ်တဲ့အခါ ထွက်လာတဲ့လေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ လွင့်စင်လာတဲ့လေကတဆင့်လည်း ရောဂါပိုးကူးနိုင်တယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီး ဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဧပြီ [……]
မ/ဥက်ကလာဆေးရုံကွီးသို့ လှူဒါနျးမညျ့ နညျးပညာကြောငျးသားနှငျ့ ကှနျပြူတာကြောငျးသားမြား စုပေါငျးတီထှငျထားသော ပိုးသတျအခနျး(Covid-19 Disinfection Chamber)
နည်းပညာကျောင်းသားနှင့် ကွန်ပျူတာကျောင်းသားများ စုပေါင်းတီထွင်ထားသော ပိုးသတ်အခန်း (Covid-19 Disinfection Chamber) ကို မ/ဥက္ကလာဆေးရုံကြီးသို့ လှူဒါန်းမည် [……]
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ဖို့ ဆန္ဒအလျောက် စာရင်းပေးထားတဲ့ ဆရာဝန် ၁၀၀၀ ကျော်နဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၁၀,၀၀၀ [……]
လစဉျထီဖှငျ့ရကျကို ၁၅ ရကျသို့ ပွောငျးလဲ သတျမှတျမညျ
ထီကံစမ်းသူများနှင့် ထီရောင်းချသူများအဆင်ပြေစေရန် အောင်ဘာလေထီဖွင့်ရက်ကို နောက်ဆုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။ မေလအတွင်းဖွင့်လှစ်မည့် ၁၅ ကြိမ်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲမှစတင်၍ ၁၅ [……]
ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးမြားအတှကျ ဓါတျဆီ အခမဲ့ ထညျ့နိုငျပါတယျဆိုတဲ့ ဆိုငျငယျလေး
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ ဤဆိုင်တွင်ဓါတ်ဆီအခမဲ့ ထည့်နိုင်ပါပြီ။ ကျောက်နီမော်ရွာအနီးအနားတစ်ဝိုက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက် ကျွန်တော်တို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့မှ လှူဒါန်းသည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် [……]
2.2.2010မှာလက်ထပ်ခဲ့တယ် 24.1.2019မှာကွာရှင်းခဲ့ပီ(သူမနဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေ) 9နှစ်ပြည့်ဖို့၈ရက်ပဲလိုတော့တယ်. Anni Dateလဲမှတ်ထားမယ်မထင်…….. နှစ်ယောက်လုံးချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်. အစပိုင်းမှာအရမ်းတွေသာယာပီးအဆင်ပြေခဲ့တယ်. တပ်ထဲမှာနေရတာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းလဲ တပ်ထဲကသူတွေပဲသိတယ်. [……]